Qaramada midoobay oo muhaajiriinta uga digtay safarka geerida badan ee badda – AwKutub News
Qaramada midoobay oo muhaajiriinta uga digtay safarka geerida badan ee badda
Hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qoxootiga ayaa dadka muhaajiriinta iyo dadka magangalya doonka ah uga digtay safarrada ay ku soo maraan badda meditiraniyaanka taasi oo sababta dhimasho badan.
Warbixin ay hay’addu soo saartay ayaa waxay ku sheegtay tirada dadka muhaajiriinta ee soo galo Europe iney sii yaraaneyso ayna sii badaneyso tirada dadka ku dhimanaya badda meditraaniyaanka.
Seddex sano ayaa ka soo wareegtay xilliga meydka wiilka yar ee 3 jirka ahaa ee Alan Kurdi laga helay xeebta Turkiga oo ay badda soo caarisay.
Sawirka ilmaha yar ee Suuriyaanka oo dunida lagu baahiyey, ayaa wuxuu ahaa mid ay dunida oo dhan ka Naxday.
Wiilka yar oo rajeeynayay inuu ammaan uu ka helo Yurub, balse kuma guuleysanin rajadiisi.
Kumannaan qof ayaa naftooda ku waayey badda Meditraneanka iyada oo sanadkan aynu ku jirno oo keli ay 1,600 qof naftooda ku waayeen.
Hay’adda arrimaha qoxootiga ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inuu safarka badda lagu maro uu yahay mid ay khatartiisu badan tahay.
Xaddiga dhimashada oo horay u ahays 42-ki qofba inuu 1 qof ka dhinto hadda waxay mareysaa 18-kii qofba inuu 1 qof badda ku dhinto, taasoo oo ah masiibo aad u weyn.
Waxayna hay’addu intaa ku dartay inay waddamada Yurub xoogga saaraan oo keli ah xagga tirada muhajiriinta, halki loo baahnaa iney bani aadaminimada wax walba ka horreysiiyaan si ay naf badan ay u badbaadiyaan.
Talllaabbooyinka waddamada Yurubta la gudboon iney sameeyaan ayaa waxay hay’addu ku sheegtay iney ka mid yihiin, iney dadka qoxootiga ah ay u fududeeyaan si ay qoysaskooda ula midoobi lahaayen, in la ballaadhiyo deegaannada daka qoxootiga la dajinayo iyo sharci u horseedo iney lafahooda badbaado u helaan oo ay kaga kaaftoomaan safarka geerida ee badda Meditiraaniyanka.
Tags: Muhaajiriin Qaramada Midoobay
Previous Entry Madasha Shiinaha iyo Afrika oo ka furmay Magaalada Beijing
Next Entry Madasha Shiinaha iyo Afrika : Kaalinta Soomaaliya